Vanorwira Kodzero DzeVanhu Vosungwa muHarare
Chikunguru 27, 2011
Nhengo dzesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika reRestoration of Human Rights, kana kuti R-O-H-R, dzakasungwa padare repamusoro reHigh Court muHarare neChitatu zvichitevera kuratidzira kwadzakaita nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC dzinonzi dzakaponda mupurisa.
Zvichakadaro, nhengo dzeMDC idzi hadzinakuunzwa kudare sezvanga zvakatarisirwa. Nhengo gumi nenhatu dzeROHR dzasungwa panze pedare repamusoro reHigh Court neChitatu mangwanani mushure mekuratidzira kwadzakaita dzichiti nhengo dzeMDC dzarakarambidzwa kubhadhara mari yechibatiso panyaya yekupondwa kunonzi kwakaitwa mumwe mupurisa, VaPetros Mutedza, mumusha weGlen View muHarare muna Chivabvu, dziri kutyorerwa kodzero dzadzo.
Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi “sei vakaponda vanhu muna 2008 vasina kusungwa?”. Varatidziri havana chavambotaura kana kuimba pavanga vachiratidzira pamusuwo wedare repamusoro asi mapurisa asvikosunga vanhu ava ndokuenda navo kukamba ye harare central.
Mutauriri weROHR VaStenrick Zvorwadza, vasvora kusungwa kwenhengo dzesangano ravo. VaZvorwadza vati chavekunetsa ndechekuti mapurisa arikushanda ane divi raakarekera.
Vati chinoshamisa ndechekuti vanhu vakaponda vanhu pasarudzo yemutungamiri wenyika yechipiri kana kuti ''run-off" muna Chikumi 2008 vanongoswero mbeya pasina zvavakaitwa asi vanhu vasina chavakaita varivo varikuswero tambiswa chamutavanhava nemapurisa.
VaZvorwadza vati panodiwa kuvandudzwa kwemashandiro anoita mapurisa kuitira kuti vose vanopara mhosva vawanikwe vachisungwa. Mashoko ava zvorwadza aya anouya mazuva mashomanana pasina ati asungwa zvichitevera kurohwa muparamende kwakaitwa nhengo yeparamende yeMDC-T inomirira Hwange Central, VaBrian Tshuma, nevatori venhau vaviri, vakaita izvi vanofungidzirwa kuti inhengo dze Zanu-PF.
Zvichakadai, nyaya ye nhengo dzeMDC sere idzo dzakarambirwa kubhadhara mari yechibatiso nedare pamusana pekupondwa kwaVaMutedza haina kunzwikwa zvakare mudare nhasi sezvo gweta rehururumende VaEdmore Nyazamba vasina kuwuya kudare.
Vasungwa ava vakasvitsa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kudare vachiti mamiriro ezvinhunu asiyana kubva panguva yavakamborambirwa kuti vabvise mari yechibatiso.
Vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana chavanoziva uyeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti nhengo dzayo idzi dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika mukati.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika VaRejoice Ngwenya vanoti mapurisa ari kusunga vanhu achitarisa kuti wabuda mumba maani.